MULTIRES အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အားလုံး Apple ကအသုံးပြုသူများက iTunes ကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြပြီးမှန်မှန်ပြုလုပ်အသုံးပြုပါ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီ mediakombayn Apple က-devices များတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒီနေ့ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod ကို iTunes ကိုနှင့်အတူထပ်တူပြုပြီးသောအခါ, ပြဿနာမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
Apple က-ကိရိယာ iTunes ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းမရှိပါရတဲ့အကြောင်းရင်း, လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပြဿနာအများဆုံးဖွယ်ရှိအကြောင်းမရှိထိခိုက်, ဒီရှုပ်ထွေးကိစ္စကိုဆန်းစစ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
iTunes ကိုမှထပ်တူ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးတိကျတဲ့ code မျက်နှာပြင်နှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုပြသသည်မှန်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အောက်က link ကို click နှိပ်ပြီးကြောင်းအကြံပြုသတိပြုပါ - ကသင့် bug ကိုပြီးသားဒီအကြံပြုချက်တွေကိုသုံးပြီး, သင်အစာရှောင်ခြင်း-ထပ်တူပြုခြင်းပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ဖျက်သိမ်းထားပြီးတတ်နိုင်သမျှပါပဲ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: လူကြိုက်များသော iTunes ကိုအမှား
အဘယ်ကြောင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod ကို iTunes ကိုအတူတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဘဲနေရသနည်း
အကြောင်းပြချက် 1: ကိရိယာ၏ချွတ်ယွင်း
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, iTunes ကို၏ထပ်တူ၏ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရခြင်းနှင့် gadget ကပုံမှန်ပြန်ညှိမှုပပျောက်နိုင်သည့်စနစ်အားရှုံးနိမ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, စဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။
ဝင်းဒိုးကိုအောက်ပါပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့မျက်နှာပြင်, ထို့နောက်သင်ကို item ၏ညာဘက်မှပွတ်ဆွဲလုပျဖို့လိုအပျပုံပေါ်သည်အထိ iPhone ပေါ်မှာ, ပါဝါခလုတ်ကိုကိုင်ထားအဖြစ်, သာမန် mode မှာကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ "ဟာ Off".
device ကိုအပြည့်အဝဖွင့်ပြီးတာနဲ့အပြည့်အဝဝန်ဘို့စောင့်ဆိုင်းတစ်ခုကို run, တဖန်တိုက်ဆိုင်ညှိယူဖို့ကြိုးစားပါ။
သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ iTunes ကို install တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုထင်လျှင်, မှားဖြစ်ကြသည်။ iTunes ကို၏ဗားရှင်းဟောင်းက iPhone ကို iTunes တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းများအတွက်ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံး - iTunes ကိုအပေါ် updates များကိုစစ်ဆေးသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရရှိနိုင် updates များကိုတွေ့ရှိကြသည်လျှင်, သငျသညျသူတို့ install, အဲဒီနောက်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါသေချာဖို့တော့လိုတယ်။
အကြောင်းပြချက် 3: iTunes ကို၏ကျရှုံးခြင်း
ကျနော်တို့ကွန်ပျူတာလေးနက်ပျက်ကွက် iTunes ကိုစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့သော၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ကြောင်းအမှတ်ဖယ်မပေးသင့်ပါတယ်။
မဟုတ်မှသာအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဖယ်ရှားလိုက်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းကွန်ပျူတာထဲမှာ install Apple ကကနေအခြားထုတ်ကုန်များမှ: ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သငျသညျ, ဒါပေမယ့်လုံးဝကအောင်တို့က iTunes ကို uninstall လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဘယ်လိုလုံးဝသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ iTunes ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
သငျသညျ iTunes ကိုမဖျက်ပစ်ပြီးစီးသည့်အခါသင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ, ထို့နောက်တရားဝင် developer ရဲ့ site မှ iTunes ကိုဖြန့်ဖြူးဖွင့်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။
iTunes ကို Download လုပ်ပါ,
အကြောင်းပြချက် 4: ခွင့်ပြုချက်ပျက်ကွက်
အဆိုပါထပ်တူပြုခြင်း button ကိုဥပမာမှာအားလုံးသည်သင်မရရှိနိုင်ပါကမီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျကို iTunes ကအသုံးပြုကြောင်း pereavtorizirovat ကွန်ပျူတာကြိုးစားနိုင်ပါ။
iTunes ကိုထိပ်မှာဒီလိုလုပ်ဖို့နဲ့ tab ကို click "အကောင့်"ပြီးတော့ step ကိုသွား "ခွင့်ပြုချက်" - "ဒီကွန်ပျူတာ Deavtorizirovat".
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေပြီးနောက်, သငျသညျတဖနျသင့်ကွန်ပျူတာကိုခွင့်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့မီနူးကို item ကိုသွား "အကောင့်" - "Log" - "ဒီကွန်ပျူတာကိုခွင့်".
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်မှာတော့သင့်ရဲ့ Apple ID ကနေ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ မှန်ကန်သော password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အဆိုပါစနစ်အား device ကိုထပ်တူပြန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်ရသောပြီးနောက်, အောင်မြင်သောခွင့်ပြုချက်၏ကွန်ပျူတာအကြောင်းအသိပေးချက်။
အကြောင်းပြချက် 5: ကို USB-cable ကိုပြဿနာ
သငျသညျကို USB-cable ကိုကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာ device ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုရင်, သင်စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းဇာသံသယသငျ့သညျ။
Non-မူရင်း cable ကိုအသုံးပြုခြင်း, သင်ပင်သင်သည်ရှိနိုင်ပါတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ကြောင်းအံ့အားသင့်မဖြစ်သင့် - Apple ထုတ်ကုန်များစွာကို aftermarket ကြိုးတွေရိုးရှင်းစွာသင်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းဖို့ခွင့်ပြုမှာအကောင်းဆုံး, gadgets ရိပ်မိကိုမအရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်အလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏။
သငျသညျမူလ cable ကိုသုံးလျှင်ဂရုတစိုက်ဝါယာကြိုးများ၏တစ်ခုလုံးကိုအရှည်နှစ်ဦးစလုံးနှင့် connector ကိုမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဆိုအမျိုးအစားထိုသို့စစ်ဆေးခြင်း။ သငျသညျထိုပြဿနာတစ်ခုတက်ရင် cable ကိုကြောင်းသံသယရှိလျှင်, ပိုကောင်းတဲ့အတူကအစားထိုးရန်ဥပမာ, ပန်းသီးထုတ်ကုန်၏အခြားအသုံးပြုသူကနေ cable ကိုချေး။
အကြောင်းပြချက် 6: မမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေးကို USB-port ကို
ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းရှားပါးပေမဲ့သငျသညျရိုးရိုးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခြား USB မှတ်-port ကို cable ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိလျှင်, သင်, တန်ဖိုးရှိဘာမျှမဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးက desktop ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုနေလျှင်ဥပမာ, စနစ်ယူနစ်၏နောက်ကျောအပေါ်ဆိပ်ကမ်း cable ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါ့အပြင် device ကို built-in ကီးဘုတ်, ဥပမာ, ကို USB-အချက်အချာသို့မဟုတ်ဆိပ်ကမ်းများမဆိုကြားခံသုံးပြီးမရှိဘဲကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းပြချက် 7: Apple က-devices များအလေးအနက်ပျက်ကွက်
သင်ကခက်ခဲ gadget ကအပေါ်တစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့်အတူထပ်တူကိရိယာနှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှရှာတွေ့လျှင်နောက်ဆုံးတော့တစ်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, app ကိုဖွင့်လှစ် "Settings" ကိုထို့နောက်အပိုင်းကိုသွား "အခြေခံ".
စာမျက်နှာ၏အဆုံးမှဆင်းသွားနှင့် partition ကိုဖွင့်လှစ် "Reset".
ကို Select လုပ်ပါ "အားလုံးက Settings Reset"ထို့နောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတည်ပြုပါ။ ယင်းသို့ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်အခြေအနေကမပြောင်းခဲ့ဘူးလျှင်, သင်တူညီတဲ့ menu ကိုရွေးချယ်ဖို့ကြိုးစားနိုင် "အားလုံးအကြောင်းအရာ Erase နဲ့ Settings" ကိုဘယ်သူဝယ်ယူပြီးနောက်ပြည်နယ်ရန်သင့် gadget ကလုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
သင်အချိန်ကိုက်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းမပေးနိုင်လျှင်, ဒီ link ကိုမှာ Apple က support ကိုဆက်သွယ်ကြိုးစားပါ။
ဗီဒီယို Watch: Diablo2Hardcore Hell Run9PaladinZeal, Part 1 A1-3 Normal (စက်တင်ဘာလ 2019).